Col. Mudan ?rayidku si dhow ha ula shaqeeyo ciidanka amniga maalinta doorashada dhow? (Dhegeyso) – Radio Daljir
Col. Mudan ?rayidku si dhow ha ula shaqeeyo ciidanka amniga maalinta doorashada dhow? (Dhegeyso)
Janaayo 6, 2014 3:48 b 0
Garoowe, January 6, 2014 – ?Wasiirka amniga Puntland khaliif ciise mudan oo hadal ka jeediyey shir jaraa?id oo lagu shaacinayey wejiga saddexaad ee nooca howl-galka amniga ee xilliga doorashada, ayaa baaq u jeediyey bulshada rayidka ah.
Col. Khaliif Ciise mudan wuxuu dadweynaha ugu baaqay inay si guud iyo si dhowba ay ula shaqeeyaan ciidamada amaanka Puntland xilliga howl-galka, ?gaar ahaan maalinta ay dhacayso doorashada madaxweynaha iyo ku xigeenka oo ah arbacada.
?shacabku ha soo wargeliyo ciidamada amniga iyo meelaha ay joogaan haday arkaan dhaqdhaaq khaldan.? Ayuu yiri Mudan
Wasiirka amniga Puntland ayaa faray ciidamada kala duwan iyo kuwa amaanka intaba inay heegan galaan isla markaasna diyaar ku noqdaan meelaha shaqada adkaynta nabadgelyada laga fulinayo ee magaalada Garoowe iyo gobollada intaba.
?Waxaan joojinay gaadiidkii kala soconayey ee raashinka, xoolaha iyo bagaashka intaba waday, dadka gaadiidlayda ah waa inay ku talo-galaan oo qorshaha hirgeliyaan.? Ayuu yiri wasiir Khaliif Ciise oo hadalkiisa ku sii daray in hakintaas ay soconayso saacado kooban
Doorashada ayaa si wayn loogu diyaar garoobay Garoowe ciidamada amaanka ayaa bilaabi doona nooc cusub oo howlgalkooda ka mid ah, musharixiinta ayaa beri akhrin doona taariikhdooda iyo weliba waxqabadkooda.
Dhegeyso: Wasiirka arrimaha gudaha Khaliif Ciise Mudan oo arrimo badan ka hadlaya
21 musharax oo u taagan Xilalka sare ee Puntland (Dhegayso)
Guddiga doorashada Puntland oo maanta soo afmeeraya howsha is diiwaan-gelinta musharixiinta